Indlela yokwenza i-backlink esebenzayo ngezinto eziphathekayo ezifanelekileyo?
Ingxoxo enesihloko esifanelekileyo, ngokuyinhloko kuba ukufumana inkqubela phambili ehlala njalo kunye neprofayile yakho yangasemva ayikwazi ukufezekiswa kuphela ngokudala i-assets ebonakalayo, nangona mgangatho ophezulu. Ewe, kubaluleke kakhulu ukwazi indlela yokwenza i-backlinks indalo exhaswe ngezinto ezintle. Yintoni eyenza ixabiso elifanelekileyo elisebenzayo? Kuthathwe ngokubanzi, i-asset ebonakalayo enobungakanani bekhasi elincinci elincinciweyo eliza kukunceda uvelise izabelo ezininzi, zilandele, ukubhaliselwa, ukuthanda, njalonjalo, ngokuhambelanayo nokuthi uwamkela kwinkqubo yokuxhotyiswa kwendalo yangoku.Kodwa le nto kukuba yonke impahla ebonakalayo ifuna ukukhuthazwa-kwaye le ngcamango elula kakhulu isoloko ilawulwa ngabathengisi be-digital kunye nee-SEO. Ewe, bayazi indlela yokwenza usebenziswano lomsebenzisi kwi-backlinks kufuneka ndiyivume, umzekelo ngeendlela eziphambili zokuhanjiswa kwezinto ezibonakalayo kunye nokuhle. Kodwa makhe sijamelane nayo - yonke imisebenzi yokukhuthazwa kwe-intanethi kunye nokuthengisa iyanqatshelwe, nangona abathengisi bewebhu be-intanethi kunye nabanini-shishini be-intanethi. Yingakho ngaphantsi ndiza kuqonda zonke iindlela eziphezulu zokukwazi ukuba wenze njani i-backlink ngaphezulu kunye nokuthengiswa kokuqukethwe.
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, nantoni na ekufuneka siyithathe ngokubalulekayo-ukuthengiswa komxholo akuphelelanga nantoni na ngokunika ithuba lokuqhagamshelanisa ukufumana, ubuncinci ngqo. Ndiyathetha ukuba isicwangciso sakho somxholo esithathwe kwinqanaba asinakulisebenzisa ngokufanelekileyo ukuba sikhonze njenge "linknet magnet. "Kodwa into enokwenziwa apha ihambelana nenxalenye yomzamo wakho jikelele - ngokuchanekileyo ukukhuthaza ukuthengwa kwekhonkco eqhubekayo kwiwebhusayithi yakho yezoshishino okanye iblogi kunye necandelo lezoshishino. Ngoko, ngezantsi kuza uludwe olufutshane lweengqungquthela zokukunceda.
Uhlalutyo lwamathuba - yinto yokuqala yokuqwalaselwa ngokubambisana kwakho kunye nephulo lokufumana. Yonke into oyifunayo ukuqala ngokukhawuleza ngokukhawuleza igama elibonakalayo kwi-niche efanelekileyo okanye ishishini shishini-indawo edala amathuba okubambisa ikhonkco.
Ikhefu lokunika ithuba-into elandelayo ebalulekileyo ekufuneka iqwalaselwe ngezinto zakho eziphathekayo. Ngokuqinisekileyo, kukho iindlela ezininzi kunye neendlela ezahlukeneyo zokubaluleka, ngokuxhomekeke ekuncintiswaneni kwamashishini atshabalalayo, uhlobo lokuthengiswa kweemarike, indlela yokunyusa imizamo yokuhlangabezana neenjongo, kunye nokufumana amathuba anxulumene nokunikezelwa kwebhajethi yakho - ngokwemigangatho yokukhuthazwa kwe-intanethi ngokwayo, kunye nokucwangcisa kunye nokuhlakanipha kwenkqubo yokuhanjiswa komxholo.
Ukuhlalutya okukhuphisanayo ukwenzela ukuba uninzi lwezicwangciso zokufumana izixhobo eziphezulu ezisetyenziswe ngabadlali bakho beemarike, ngokuhambelana nemathuba amaninzi okuphepha iingqungquthela ezinkulu ezibethelela abachasi bakho.
Ukubandakanya uluntu ukuze kufumaneke ukukhutshwa kwe-intanethi ngokubanzi kwizabelo, ukukhankanya, ukudibanisa, kunye nezizukulwana ezikhokelayo.
Ukusebenzisa isakhiwo sokuqhawulwa kwekhonkco kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwemifanekiso yelungelo.
Ukuphuhlisa intsebenziswano yezoshishino, ukuqiniswa kokuhlanganiswa kwamacandelo okuhamba kunye nokubonisana ngokubambisana ngamanyathelo okuza kubandakanyeka koluntu kunye nokuthengwa kwekhonkco Source .